Xulka Gabadhaha USA oo iska xaadiriyey Final-ka Koobka Adduunka Dumarka ee 2019 …+ SAWIRRO – Gool FM
(Paris) 02 Luulyo 2019. Xulka Gabadhaha Mareykanka ayaa iska xaadiriyey Final-ka Koobka Adduunka Dumarka2019, kadidb markii ay garaaceen caawa xulka England.
Gabadha difaacanaya Koobka Adduunka Haweenka ee USA ayaa 2-1 uga adkaaday xulka England, waxaana ay doonayaa inay koobka difaacdaan oo dalkooda dib ugu celiyaan.
Dhammaan goolasha la iska dhaliyey kulankan ayaa yimid qeybtii hore ee ciyaarta, waxaana goolka la horreyey gabadhaha USA iyaga ayaana hoggaanka u qabtay kulanka kaddib arkii ay shabaqa soo taabatay 10’daqiiqo xiddigta Christen Press.
Laaciib sagaal daqiiqo kaddib xulka England ayaa la yimid goolka barbaraha waxaa u dhaliyey 19’daqiiqo Ellen White, kulanka ayaana sidaas ku noqday gar isku mid ah 1-1.
Marka kale ayay gabadha Mareykanku hoggaanka u qabteen ciyaarta waxaana 31’daqiiqo u dhalisay xiddiga weerarka uga dheesha ee Alex Morgan, kaddib caawin ay ka heshay Lindsey Horan, kulanka ayaana lagu kala nastay 2-1 looga gacan sarreeyey England.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay waxaa kulankan laga diiwaan geliyey in VAR oo gool diiday, rigoore laga qabtay England iyo weliba kaarka cas oo ay ka qaadatay 86’daqiiqo Millie Bright, ciyaarta ayaana ku soo dhammaaday 2-1 ay guusha ku qaateen USA.
Xulka England ayaa isaga haray tartanka Koobka Adduunka Dumarka 2019, halka final-ka tartankan ay gaareen gabdhaha USA oo sugi doona kama dambeysta xulkii soo adkaada habeen dambe Holland iyo Sweden.
Xulka qaranka Brazil oo iska xaadiriyey finalka Copa America 2019, kaddib markii ay garaaceen Argantina.... + SAWIRRO